एकदम अक्सर काम गर्न आफ्नो पीसी दिन एक आवश्यकता हो, तर यसको गतिविधिहरु निगरानी र यसलाई त्यहाँ एक निश्चित समय को अन्त मा बन्द गर्न क्षमता छ। केही कार्यक्रम तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेपछि सत्र Vindous स्वतः समाप्त, यी कार्यहरू को कार्यान्वयन लागि प्रदान गर्नुहोस्। अक्सर तथापि, यी कार्य गर्न पर्याप्त छन्।
त्यसपछि प्रयोगकर्ता कम्प्युटर बन्द गर्न एक घडी प्रदान गर्दछ जो धेरै उपयोगी विशेषताहरु को सहायता, गर्न आउँछ। यो संग, यो सिस्टम एकाइ तत्व मा दखल गर्नू शक्ति वा अनावश्यक भार लागि चिन्ता गर्न सम्भव छैन। यो प्रयोगको लागि निर्देशनहरू धेरै उपयोगी समारोह धेरै फरक हुन सक्छ पक्कै छ। उदाहरणका लागि, तपाईं रात मा एक चलचित्र मा गर्न सक्नुहुन्छ र चुपचाप तपाईं काम गर्न सिस्टम छोडेर, सुत्न जाने सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा चिन्ता बिना ओछ्यानमा जान्छ। Sutra वा, काम गर्न जाने डाउनलोड र कम्प्युटर बन्द गर्न समय दुवै सेट।
यो एक घडी गर्न उल्लेख गर्नुपर्छ कम्प्युटर बन्द गर्ने खोल नै Vindous मा निर्मित, त्यसैले तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्दैन। पहिलो हामी आदेश शीघ्र खोल्न आवश्यक छ। "- रन सुरु गर्नुहोस्", साथै को «विन + R» संयोजन लागू यो प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। लाइन मा "रन" आवश्यक "को बन्द" आदेश को नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसको मापदण्डहरु को मूल्य नियुक्त गर्न छ। उदाहरणका लागि, «बन्द 3600 -टी -S लागि निर्देशन -टी» प्रक्रिया प्रदर्शन गरिने पछि सेकेन्डमा मापन समय, संकेत «कम्प्युटर बन्द गर्न, र", जहाँ «-S" जिम्मेवार छ।
विधि अत्यन्तै सरल, तर सम्पूर्ण सजिलो छैन। त्यसैले, तपाईं जहाँ तपाईं विभिन्न निःशुल्क विकल्प फेला पार्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट देखि कम्प्युटर बन्द गर्न घडी को कुनै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई बीच त्यहाँ धेरै सुविधाजनक कार्यक्रम, पनि सक्षम एक निश्चित कार्य पछि बन्द गर्न कम्प्युटर मा बारी, र केवल केही समय पछि मात्र यो सुविधा सीमित जुन छैन। तपाईं सिस्टम बन्द गर्नुपर्छ जब साथै, तपाईं सही मिति निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो आवेदन सामान्यतया, हल्का छन् प्रणाली र आफूलाई एउटा प्रयोगकर्ता मैत्री इन्टरफेस जहाज छैन। यो तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर एक मानक सुविधा Vindous, कार्यान्वयन, "सो घडी" प्रक्रिया तल आउँछ जो भन्दा धेरै कार्यात्मक छ भन्दै द्वारा समेट्न सकिन्छ।
यो Microsoft बाट खोल कार्यक्रम को नयाँ संस्करण को रिलीज संग अवस्था सुधार भएको छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। क्षणमा, विन्डोज7मानक कार्यअनुसूचक मार्फत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै छन्, र ग्याजेटहरू विभिन्न माध्यम तयार बनाएको समाधान को एक नम्बर छ। यो कम्प्युटर बन्द गर्न एक घडी रूपमा इच्छित कार्य लागू गर्न ठूलो सान्त्वना गर्न अनुमति दिन्छ।
यति धेरै आवेदन र कम्प्युटर बन्द स्वचालित स्विच समर्थन देखि परीक्षाको amiss र कम्प्युटर सफ्टवेयर मा पहिले नै स्थापित हुन छैन। उदाहरणका लागि, यो अक्सर आजको मिडिया खेलाडीहरू धेरै मा, केवल एक प्लेब्याक अडियो र भिडियो फाइलहरू सीमित छैन जो आफ्नो क्षमता, निर्माण गर्न पाइन्छ। त्यसैले, तपाईं पनि एक घडी गरेर कम्प्युटर बन्द गर्न एक विशेष कार्यक्रम आवश्यक छैन।
डाउनलोड PSP मा खेल कसरी - एक संक्षिप्त पुस्तिका
5 तरिका शीर्ष: कसरी "इन्स्टाग्राम" आफ्नो कम्प्युटरबाट तस्बिर अपलोड गर्न
प्लग-इन अद्यावधिक गर्ने? उपयोगी आशय
इंद्रधनुष कैसल होटल3* (साइड, टर्की): पर्यटकहरु बाट फोटो र समीक्षा
को न्यानो महिनामा उपयुक्त धनु के पत्थर छ?
आशिष् जवान रूपमा हिजो, आज र भोलि विवाह परम्परा?
वर्ण "धेरै खुसी परमेश्वरले" dvenadtsatiseriyny एनिमे निर्देशक Daiichi Akitaro मा
मेरिबोर, स्लोभेनिया: ठाँउहरु र फोटो
Dialysis - प्रक्रिया मा स्थान लिन्छ रूपमा छ? मृगौला dialysis लागि के तयारी आवश्यक छ?